ဟက်ပီးဘတ်သ်ဒေးပါ….တန်ခူးမောင်လေးရေ။ တန်ခူးစာဖတ်ရတာ ငယ်ငယ်က အစ်မတွေ ကျနော့်ကို ဂါဝန်ဝတ်၊ နှုတ်ခမ်းနီပါးနီတွေနဲ့ ကြက်တောင်လေးစည်းပြီး မိန်းကလေးလို ပြင်ဆင်ပေးတာကို သတိရမိတယ်။
Why I don't have suchakind sister? :(
I always visit your blog during my lunch break.
I also have only one brother5years younger than me.
While I am reading your post, I remember him.
He is also lazy boy.
Your brother is now mature, but my brother isn't mature yet :(
ကျွန်တော့် မောင်ရှင်လောင်းပို့စ်မှာ မြင်းပုလေးနဲ့မှ ဆိုပြီး ဂျီကျတဲ့မောင်လေးအကြောင်း စာမူခပေးသွားတာ အခုမှပဲ စုံစုံလင်လင် ဖတ်ရတော့တယ် အမရေ။ မောင်လေးဆိုတော့ ငယ်ငယ်ပဲမှတ်တာ ကျွန်တော့်ထက် အများကြီးကြီးတာပဲး)ကျွန်တော့်မှာ ညီလေးမရှိပေမယ့် ညီမလေးတစ်ယောက်တော့ ရှိပါသေးတယ် ဟဲ ဟဲ
အကိုရေ ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့မှသည် ရှေ့ဆက်အေးချမ်းပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ
ချစ်စရာ မောင်လေး အကြောင်းကို မျက်စေ့ထဲမှာ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် ပုံပေါ်လာအောင်ရေးထားတာ ဖတ်လို့ ကောင်းပါ့...
တန်ခူးရဲ့ချစ်မောင်လေး ၃၃ နှစ်မြောက် မင်္ဂလာ မွေးနေ့ မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း ရာကျော်တိုင်အောင် ချစ်တဲ့ မမနှစ်ယောက်နဲ့ အခုလိုဘဲ ရန်ဖြစ် ပြန်ချစ် ဇာတ်လမ်းတွေ ဆင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်...။
**** ဒီပိုစ့်ကို သူလာဖတ်ပြီး တန်ခူးကို ဘယ်လို အားပေးသွားတယ် ဆိုတာလေးလဲ ပြောပြအုံးနော့...။
Happy Birthday...! to your brother.
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ပါ မတန်ခူးရဲ့ မောင်လေး...
အမက ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးတော့ အမမောင်လေးက ကျွန်တော်နဲ့ တော်တော်လေး တူတယ်ဗျ.. စာကျက်ပျင်းတာကတော့ အတူဆုံးပဲ...
အမရေ စာအရေးအသားကောင်းလွန်းလို့ အမြဲရောက်ဖြစ်ဖတ်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာမှမရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး ဒီနေ့တော့ အမ မောင်လေးက အိမ်ကညီမအငယ်ဆုံးလေးလိုပဲ ဆိုးပုံလေးတူနေလို့ သတိတရဝင်ရေးသွားပါတယ်။ Happy Birthday to your brother ပါနော်။ BTW ဦးကိုပေါပုံကို မြင်ရောင်ပြီး ရယ်ချင်သွားပါတယ် :D
အမြဲ အလိုလိုက်။ ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ အစ်မ ၂ ယောက်ကို လည်း သတိရသွားတယ်။
တန်ခူးတို.မိသားစုလေးက ချစ်တတ်သူတွေရဲ. နွေးထွေးတဲ့ မိသားစုလေးပါပဲနော်..။
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ.. တန်ခူးမောင်လေးရေ..
Aww..., I wantasister like that. "Happy Birthday par maung-lay yel.."
မတန်ခူးရဲ့ မောင်လေး မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေကြောင်း အတူဆုတောင်းသွားပါတယ်။
မတန်ခူးက ငယ်ငယ်က စန္ဒာပုံ ဆံပင်လား။ အနော်က ဒိုင်ယာနာ.. ဟိ.. ဆီမရွှဲဘူး။
အမရယ့် မောင်လေး အသက်ရာကျော်
ထောင်ကျော် ရှည်ပါစေလို့ ၀ိုင်းဆုတောင်း
အမတန်ခူးချစ်သော မောင်လေး ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ အမစာဖတ်လိုက်တာနဲ့တင် မောင်လေးကို ချစ်ခင်စိတ်တွေ မြင်နေရတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်လေးကို အမမောင်လေး လာကြည့်ရင်တော့ တပြုံကြီးမိပြီထင်တယ်နော် အမတန်ခူး။
မတန်ခူးမောင်လေးက guns & roses ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ GNR ခေတ်က ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်ကခေတ်နဲ့ တူနေလို့ အသက်တူလာများလားလို့..သူက ငယ်သဗျ။ စာရေးကောင်းလို့ ချစ်စရာမောင်နှမတွေအကြောင်း ဖတ်ပြီး အိမ်က အကိုကို သတိရသွားတယ်။ အကြီးတွေက အငယ်ဆို အမြဲညှာကြ၊ အလိုလိုက်ကြတာ သိပ်ကောင်း :))
ဒီစာလေး ဖတ်ပြီး အကောင်းဆုံး မိဘ၊ အမ တွေရလို့ ကံကောင်းတဲ့ မောင်လေးကို မေတ္တာကို တန်ဖိုးထား နားလည်မှုတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ လို့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ချိုသင်းတို့မှာလဲ မောင်လေး တယောက်ရှိခဲ့တယ်။ ချိုသင်းနဲ့ တနှစ်ကြီး တနှစ်ငယ်။ မိန်းကလေး ၄ယောက်မှာ အငယ်ဆုံးက ယောကျာင်္းလေးတယောက် ထပ်ရတာမို့ ချစ်လိုက်ကြတာ တုန်လို့။ သူကလဲ အလိုလိုက်တော့ ဆိုးချင်တယ်။ Balance ကို မထိန်းနိုင်သေးဘူး။ ဆိုးချင်ရင် ဆိုး၊ လိမ်မာတော့လဲ သူ့အပြင် မရှိ။ ခုတော့ သူ ဆုံး တာ ၇နှစ် ရှိပြီ။ သူဆုံးတော့ အသက်က ၂၇ နှစ်။ မတန်ခူးစာလေးဖတ်ပြီး သူ့ကို လွမ်းလိုက်တာလေ..
စာဖတ်တာတော့ မတန်ခူး ရဲ့ မောင်လေးအကြောင်းပါ....
ဖတ်နေရင်း မျက်စေ့ ထဲ မြင်နေတာက သားနော်နော်...
ဘယ်လိုစပ်လို့ မှ အမျိုးမတော်တဲ့
မတန်ခူး အဖေအလှည့်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ အလှည့်ပေါ့။
အစ်မမှာ ညီမလေးပဲ ရှိတယ်။ မောင်လေး မရှိဘူး။ အစ်ကိုတော့ သုံးယောက်တောင်ရှိပြီး သုံးမျိုး ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ မောင်လေးများရှိရင် ဘယ်လိုချစ်မလဲလို့ တွေးကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ ချစ်တတ်တဲ့ အစ်မ ရထားတဲ့ တန်ခူးမောင်လေး
အစ်မ မောင်လေး မွေးနေ့ မှာ ပျော်ပါစေ အစ်မကြီးတန်ခူးရဲ့ အပြင်က မောင်လေးအတွက် ဘလော့ပေါ်က မောင်လေး က ဆုတောင်းပါတယ်လို့။
အခု မှWesheme ကနေရောက်လာပြီး
မတန်ခူးရဲ့ မောင်လေးက ဒီပို့စ်ကို တွေ့ရင် ကျေနပ်မှာပါ။ :)
မတန်ခူးမောင်လေးအကြောင်းဖတ်ရတော့ ကျနော့်မောင်လေး လည်း သတိရမိတယ်.. ယောင်္ကျားလေးတွေက ဥာဏ်ကောင်းပြီး စာကျက်ပျင်းတာ တူတယ် ထင်တယ်.. ကျနော့်မောင်လေးလည်း အဲလိုပဲ.. စာမေးပွဲဖြေဖို့ကို မနက်ပိုင်း ဂိမ်းဆော့ပြီးမှ သွားဖြေတာ.. အမ ၂ ယောက်က အရမ်းချစ်ခံရတာ ကံကောင်းတာပေါ့.. ကျနော်က အမ လိုချင်တာ.. :)
မတန်ခူးမောင်လေးတော့ ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ပြီးရင် သဘောကျနေမှာ.. မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ် အမရေ.. :)
မတန်ခူးရေ.. အမနဲ့ ငယ်ဘ၀က ခပ်ဆင်ဆင်ပဲ။ အဖေက ယောက်ျားလေးလို မွေးတာရော.. ဆံပင် စန္ဒာပုံ ထားရတာရော။ ယောက်ျားလေးလို ၀တ်ရတာ တွေရော..တူတယ်။ အင်း မောင်လေးတယောက် ရှိတာလည်း တူတယ်။ ဒါမဲ့ အမတို့က ညီအမ လေးယောက်ထဲက မောင်လေးတယာက်တည်း။ သူ့ခမျာလည်း ချိုသင်းမောင်လေးလိုပဲ အသက် ၂၈နှစ်နဲ့ ဆုံးသွားရရှာတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက တန်ခူး မောင်လေးလို မလိမ်မာရှာဘူး။ တန်ခူးမောင်လေးက အများကြီး ချစ်စရာကောင်းပြီး အများကြီး လိမ်မာတာ။ အဲလိုကလေးမျိုးလေး.. ဘ၀ထဲမှာ ဒီမိသားစုနဲ့တူတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ အသက်ရှည်ရှည် နေရပါစေ..။